चीन २-प्लाई हाउस र्याप कारखाना र निर्माताहरू शाइनिंगप्लास्ट
स्थायित्व र उच्च सास फेर्नेपन शाइनिंग्र्यापको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतीकहरू हुन्।
कपडा तौल: ~ 55 ~ g जीएसएम
सामग्री: पीपी / पीई
संरचना २ तह: LDPP + HDPP वा LDPE + HDPE
जाल: * * / / * * / / * * / / * * / / * * / /
बुनाई सर्त: पानी जेट करघा वा गोलाकार तान
रंग: सेतो वा ग्राहकको अनुरोध अनुसार।
मुद्रण: Colors रंग सम्म प्रिन्टि।
आकार:3'X 100'3'X 150'9'X 100'9'X 150'9'X 195' 10 'X 100' 10 'X 150' 10 'X 195'
: आत्म-पालन उपलब्ध छ
पीपी / पीई बुनेको शाइनिंग्र्याप पर्खाल खराब मौसम, फफूको बिरूद्ध रक्षा गर्दछ। यो वाटरप्रूफिंग, ऊर्जा-कुशल, र अत्यधिक पारगम्य छ। निर्माणमा, हावा र चिसो घुसपैठ सधैं जोगिन सकिदैन। शाइनिंग पल्ट हाउसवार्प एक टिकाऊ, वाटरप्रूफ, मौसम प्रतिरोधी बाधा हो जसले ओसिलोपनालाई रोक्छ, ढुसीलाई भित्र जानबाट रोक्छ र पानीको बाफ बाहिर जान दिन्छ।
एक्सट्रूसनबाट शुरू गरेर, हामी अनुकूलनतर्फ ड्रइ / / एनिलिaling्ग अनुपातलाई ट्युन गर्दै प्रत्येक शिंगल धागोको राम्रो ख्याल राख्छौं।
उन्नत बुनाई तानहरूको साथ अंकित गरी स्क्रिममा बुनाईलाई तनाव बनाउँनको लागि यसमा डाय-कोटिंगको बेला तातो पार गर्नु भन्दा ठीक अघि। यसैबीच विशेष डिजाइन गरिएको कूलि system प्रणालीले लेप पछाडि सतह चिक्ताको निश्चित गर्दछ। केवल एक स्थिर संकुचन दर मात्र होईन तर राम्रो टेन्सिल पनि हो।
राम्रो छिद्रले निश्चित गर्दछ कि मुद्रण पछि उच्च सास फेरी आउँदछ।
१. कागज वा पीपी कोर र बाध्यकारीमा कडा लपेटिएको (फ्लैट प्यालेट्स)
२. विशेष डिजाइन गरिएको प्यालेटाइजेसन (युएस वा ईएन मानक फ्ल्याट प्यालेटहरू वा क्रेट प्यालेटहरू)।
·टिकाऊ: शाइनिंग्र्याप एक उत्तम / कठिन / टिकाऊ दोस्रो तह र मौसम प्रतिरोधी बाधा हो। हामी ध्यानपूर्वक बाहिर निकाल्ने क्रममा यार्नको ख्याल गर्छौं। बलियो स्थायित्व तबदेखि सुरू हुन्छ। यसका साथै दायाँ बुनाई काल र कोटिंग टेक्नोलोजी, फेब्रिक एक राम्रो शक्ति रहन्छ जहाँसम्म यो तपाईंको हातमा जान्छ।
·हल्का वजन: Shiningwrap एक हल्का सम्पत्ती अधिकार छ कि यो गर्न को लागी र स्थापना गर्न सजिलो बनाउँदछ।
Me पारगम्य / माइक्रो-छिद्रित: छिद्र प्रक्रियाले सुनिश्चित गर्दछ कि शाइनिंग्रपले अतिरिक्त बाफलाई भित्रीबाट उम्कन अनुमति दिन्छ अतिरिक्त ओस-प्रेरित फफूँबाट जोगाउन।
·मौसम प्रतिरोधी: यार्न एक्सट्रुजसनको शुरुवात चरणदेखि, हामी हरेक बेबी यार्नको हेरचाह महान एनीलिaling्ग र ड्रइ by अनुपातबाट थाल्छौं, र हामीले उन्नत तानहरूद्वारा बुनाउँदछौं, टि-डाइ कोटिंगमार्फत यो समाप्त नभएसम्म, र यसले सबैलाई राम्रो संकुचन दर सुनिश्चित गर्नेछ। , राम्रो टेन्सिल / टियर र राम्रो डेलेमिनेसन। बाहिरी सुरक्षा कडा हावा वा खराब मौसमको समयमा पनि आश्वासन दिइनेछ।
·आत्म-पालन उपलब्ध छ:
ब्याकसाइडमा तातो पग्लने ग्लुले हाम्रा ग्राहकहरूलाई थप विकल्प प्रदान गर्दछ जुन स्वयं पालन गर्ने फंक्शन हो। यसले घरको र्यापलाई अझै स्थिर रहन मद्दत गर्दछ निर्माणको क्रममा कडा बतास र आँधीबेहरी पछि पनि। साथै, यसले कामदारलाई अधिक सजीलो स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ।
·आँसु प्रमाण: एक महत्त्वपूर्ण बिन्दुको रूपमा, आँसुको शक्ति (हिंस्रक स्थापनाको बखत पनि ठूलो आँसु प्रतिरोध) लाई हाम्रा उन्नत सुविधाहरू र अत्याधुनिक उत्पादन टेक्नोलोजीले मूल्यवान् बनाउनुपर्दछ, अधिक महत्त्वपूर्ण रूपमा निपुण श्रमिकहरू।
·जलरोधक: एक औसत र्‍यापको विपरीत, नराम्रो बुनाइले टेपहरूको बीचमा धेरै प्वालहरू र स्पेसिing गराउँछ। शाइनिw्रापमा उत्कृष्ट बुनाईको गुणवत्ता छ जुन कपडाको प्रत्येक इन्च बनाउँछ।
·यूवी प्रतिरोधी: दीर्घकालीन यूवी एक्सपोजर वा दीर्घ-अवधि निर्माणमा स्थिरिकरण सुनिश्चित गर्न हामीले उत्तम यूभी उपचार र स्टेबलाइजर प्रयोग गर्‍यौं।
अघिल्लो: --प्लाई सिंथेटिक छत अन्डरलेमेन्ट
अर्को: सास फेर्ने झिल्ली